Izikhwama ze-Cryptocurrency: Ukufaka nokusetshenziswa ku-Linux - Ingxenye 2 | Kusuka kuLinux
Ukuqhubeka nokuthunyelwe kwethu kusukela izolo, okungukuthi, ingxenye yokuqala emayelana nokufakwa nokusetshenziswa kwe-6 yokuqala "Izimali zemali ze-Cryptocurrency" (Wallets Cryptos) Kwaziwa kakhulu futhi kusetshenziswe ku Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile kusekelwe ku I-GNU / Linux, namuhla sizohlola ezinye ezingu-6.
I-Las okokuqala 6 Zaziyi: Armory, Atomic Wallet, Bitcoin Core, Bither, Electrum Bitcoin Wallet neEksodus. Futhi i- okulandelayo 6 Kuzoba: iBitPay, iBitcoin Wallet Coin Space, iBlockstream, iJaxx, iMyMonero neSamurai Wallet.
Kulabo abafisa ukuhlola ingxenye yokuqala yale ncwadi, ngemuva kokuqeda ukufunda le ncwadi, bangakwenza lokho ngokuchofoza isixhumanisi esilandelayo esinikezwe ngezansi:
“The« Crypto Wallets »(Ama-wallet e-Cryptocurrency / ama-wallet wedijithali) avame ukuchazwa njenge: Ibhuloho elivumela abasebenzisi ukuthi baphathe ama-cryptocurrensets abo atholwe endaweni yesikhulumi seBlockchain. Okusho ukuthi, ucezu lwesoftware noma i-hardware lapho imisebenzi yokwamukela nokuthumela ingenziwa khona, ngenethiwekhi ye-blockchain ye-cryptocurrency ngayinye. Ngaphezu kwalokho, ijwayele ukwakhelwa kuphela ukugcina nokuphatha okhiye bomphakathi nezikhiye eziyimfihlo zama-cryptocurrensets ethu. " Izikhwama ze-Crypto - izikhwama ze-Cryptocurrency: Ukufaka nokusetshenziswa ku-Linux (Ingxenye 1)
Izikhwama ze-Cryptocurrency: Wallets Cryptos
1 Izikhwama ze-Cryptocurrency: Wallets Cryptos
1.1 Ukufaka nokusetshenziswa kwezikhwama zemali eziyi-6 ngaphezulu
1.1.2 Isikhala semali seBitcoin Wallet
1.1.3 Okuhlaza okuvimba amabhlokhi
1.1.6 Isikhwama se-Samurai
Ngaphambi kokuhlola ukufakwa nokusetshenziswa kwalezi ezinye 6 Izimali zemali ze-idijithali yemali, sizokhumbula futhi ukuze kuzuze bonke, ukuthi sizobe sisebenzisa i- Phendula (Isifinyezo Esibukhoma Esifakekayo) inkambiso eqanjwe Izimangaliso GNU / Linux okuncike ku- I-MX Linux, futhi yakhiwe ngokulandela yethu «Umhlahlandlela we-Snapshot MX Linux» futhi yenzelwe i- Izimpahla ze-Crypto Assets Digital Mining, kulandela izincomo eziningi, lezo ezifakiwe kushicilelo lwethu zabizwa «Guqula i-GNU / Linux yakho ibe uHlelo Lokusebenza olulungele iMayini Yedijithali».
Ukufaka nokusetshenziswa kwezikhwama zemali eziyi-6 ngaphezulu
BitPay ingafakwa kufayela lakho le- Thwebula i-distro ye-GNU / Linux ehambisanayo, njengoba kukhonjisiwe ngesixhumanisi esilandelayo «Nika amandla i-Snap ku-Debian bese ufaka i-BitPay«. Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda nokufakwa ngomyalo olandelayo womyalo nge-terminal, singawuqala nge- Imenyu enkulu.
Uhlamvu lwemali ingafakwa kufayela lakho le- Thwebula i-distro ye-GNU / Linux ehambisanayo, njengoba kukhonjisiwe ngesixhumanisi esilandelayo «Nika amandla i-Snap ku-Debian bese ufaka i-Coin Wallet«. Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu.
Kodwa-ke, esifundweni sethu esifundwayo ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda nokufakwa ngomyalo olandelayo womyalo nge-terminal, singayiqala nge-console, ngoba ukuxhumana okuqondile akuzange kudalwe ngokuzenzakalela ku Imenyu enkulu.
Okuhlaza okuvimba amabhlokhi
Okuhlaza okuvimba amabhlokhi ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni en Ifomethi ye- ".AppImage". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, ngemuva kokulanda sisebenzise kuphela i- ifayela elilandiwe, lapho siqala khona ukusebenzisa izimvume zokwenza.
Kodwa-ke, ayizange idale ukuxhumana okuqondile ne- Imenyu enkulu, futhi angizange ngishiye nomkhondo wokufakwa kunoma iyiphi indlela ye- Isistimu yokusebenza. Ngakho-ke kucatshangwa ukuthi, ukuze uyiqale ngawo wonke amathuba, kufanele ucindezele abasebenzisekayo ".AppImage".
I-Jaxx ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni en Ifomethi ye- ".AppImage". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, ngemuva kokulanda sisebenzise kuphela i- ifayela elilandiwe nge-console nepharamitha «--no-sandbox», lapho siqala khona ukusebenzisa izimvume zokwenza.
Kodwa-ke, ayizange idale ukuxhumana okuqondile ne- Imenyu enkulu, futhi ayishiyanga mkhondo wokufakwa kunoma iyiphi indlela ye-OS. Ngakho-ke, kucatshangwa ukuthi ukuze uyiqale ngawo wonke amathuba, kufanele yenziwe nge-terminal noma yakhe ukuxhumana okuqondile nepharamitha eshiwo ngenhla.
I-MyMjonga ingalandwa kusuka kufayela lakho le- Iwebhusayithi esemthethweni en Ifomethi ye- ".AppImage". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, ngemuva kokulanda sisebenzise kuphela i- ifayela elilandiwe, lapho siqala khona ukusebenzisa izimvume zokwenza.
I-Samurai Wallet ingalandwa kusuka kufayela lakho le- isigaba sokulanda esisemthethweni en ifomethi ".deb". Ngakho-ke, ukufakwa nokusetshenziswa kwayo kungaba lula kakhulu. Esifundweni sethu ku Izimangaliso, Ngemuva kokulanda senze kuphela umyalo olandelayo nge-terminal:
Ngemuva kwalokho, ungagijima Isikhwama, kusuka isixhumanisi esiqondile i-del Imenyu enkulu:
Mhlawumbe kolunye ushicilelo, sizokhombisa ukufakwa nokusetshenziswa kokunye okungu-6, kanye nezinhlelo zokusebenza ezilawula "Izikhwama ze-Crypto" Izingxenyekazi zekhompuyutha ezaziwa ngokuthi I-Trezor y I-Ledger.
Ngemininingwane engaphezulu ngakunye kwe- "Izikhwama ze-Crypto" okukhulunywe ngayo engxenyeni yokuqala neyesibili, ungachofoza kulezi zixhumanisi ezilandelayo: Inhlangano yeBitcoin y IBit2Me Academy.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nokufakwa nokusetshenziswa kwe-6 «Billeteras de criptomonedas»ngaphezulu, okungukuthi, kokunye Ama-Crypto Wallets noma ama-Digital Wallets Kwaziwa kakhulu futhi kusetshenziswe ku Izinhlelo ezisebenza mahhala futhi ezivulekile kusekelwe ku I-GNU / Linux, njengomphelelisi wengxenye yokuqala, khonza njengesiqondiso esihle kakhulu kulabo abaqaliswe kulo mkhakha wobuchwepheshe owaziwa ngokuthi Defi; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Izimali ze-Cryptocurrency Wallets: Ukufaka nokusetshenziswa ku-Linux - Ingxenye 2